Duqa Muqdisho oo hanbalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed.
Duqa magaalada Muqdisho Ahna Guddoomiyaha G/Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aaddan maalinta dhalinyarada.
munaasabadda 15-ka bisha May oo ah maalinta dhalinyarada iyo sannadguuradii 75-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Ururkii SYL ee xornimo u dirirka Soomaaliya ayaa waxaa maanta laga xusayaa gobolada dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay meel sare uga jiraan horumarinta dalkooda, gaar ahaan waqtigii xornimo-doonka iyo hadda oo Soomaaliya ay soo kabanayso.
Gudoomiyaha ayaa xusay in maalintan ay xusuusineyso dhalinta Soomaaliyeed sida loogu baahan yahay midnimada iyo ka shaqeenta aayaha dalkooda.
Gudoomiye Yariisow oo ka hadlayay mustaqbalka dhalinyarada xiligaan ayaa xusay inay weli fursad haystaan maadaama ay dadka Soomaaliyeed %75 dhalinyaro yihiin,isagoo intaasi ku daray maamulkiisu uu da’yarta diyaar ula yahay wax walba oo lagu hagaajinayo mustaqlkooda Soomaaliyana lagu horumarinayo.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay hirgeliyeen mashaariic shaqo abuur loogu sameeyey dhalinyarada, iyadoo maamulka loo daadejiyey degmooyinka kala duwan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Wasiirro, Saraakiil Ciidan iyo masuuliyiin kale ayaa xalay 12:50am xiliga Muqdisho Ubax dhigay Taallada SYL, iyagoo ku dheeraaday qiimaha ay maantaan u leedahay bulshada Soomaaliyeed.
← Madaxweynaha Turkiga oo ku baaqay kulan degdeg ah oo ay yeelanayso hay’adda iskaashiga wadamada islaamka
DHAGEYSO warka subaxnimo ee star fm 15-05-2018 →